नयाँ दल खाेल्ने याेजनाबाट पछि हटे खरेल ! « Bagmati Online
नयाँ दल खाेल्ने याेजनाबाट पछि हटे खरेल !
काठमाडौं, १५ फागुन । ‘हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली’ अभियानबाट पूर्व डिआईजी रमेशप्रसाद खरेल अलग्गिनुभएको छ । विहीबार (आज) घोषणा गर्ने भनिएको ‘हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली’ अभियानबाट पूर्व डिआईजी खरेलसँगै पूर्व कायममुकायम रक्षा सचिव देवेन्द्र सिटौंला र राजकुमार यादव पनि अलग्गिनु भएको छ ।
यस अभियानमा ज्ञानेन्द्र शाहीलाई पनि राखिएपछि तत्कालका लागि तीनै जना अलग्गिनु भएको हो । भ्रष्टाचारविरोधी, सुशासन, राष्ट्रहित र नागरिकका हक अधिकारलाई केन्द्र राखेर घोषणा गरिने भनिएको यस अभियानबाट अभिव्यक्ति र कार्यशैलीका कारण विवादित बनेका शाही हटाइएका व्यक्ति हुन् ।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रमबाट अलग्गिएको प्रति पूर्व डिआईजी खरेलले फेसबुकमा लेख्नुभएको छ, ‘विशेष कारणबस यस अभियानमा म’लगाएत देवेन्द्र सिटौंला, राजकुमार यादव उपस्थित हुन असमर्थ रह्यौं । असमर्थताको लागि क्षमाप्रार्थी छु ।’